पारासिटामोल धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ? स्ट्रोक र हृदयघात निम्त्याउला – Health Post Nepal
पारासिटामोल धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ? स्ट्रोक र हृदयघात निम्त्याउला
२०७८ फागुन २६ गते ७:४६
काठमाडौं–दुखाई कम गर्ने औषधि पारासिटामोल धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ? त्यसो भए विचार पु¥याउनुस् है। एक अनुसन्धानले उच्च रक्तचाप भएका बिरामीहरुका लागि यो औषधिको दीर्घकालीन प्रयोग कत्तिको सुरक्षित छ भन्नेमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।
एक नयाँ अध्ययनले पारासिटामोलको लामो समयसम्म प्रयोगले उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरुमा हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम बढाउन सक्ने देखाएको छ। यो संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने औषधि हो। ज्वरो र दुखाइ कम गर्नका लागि नेपालमात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा पारासिटामोलको प्रयोग गरिन्छ।
लामो समयसम्म यो औषधिको प्रयोग कत्तिको फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरामा थोरै प्रमाणहरू छन्। यसका बावजुद यो औषधि पुरानो दुखाइ कम गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।
अनुसन्धानकर्ताहरु भन्छन्–धेरै महिनासम्म यो औषधि सेवन गर्ने बिरामीहरूका लागि यसको फाइदा र जोखिमहरूमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।’ यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म टाउको दुख्ने र ज्वरोका लागि यो दुखाइ कम गर्ने औषधिको प्रयोग कत्तिको सुरक्षित हुन्छ भन्नेमा यो अनुसन्धानले पारासिटामोललाई गैर–स्टेरोइडल एन्टी–इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआइडि) भनिने दुखाइ निवारक औषधिहरूको विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यी औषधिहरूको बढी प्रयोगले रक्तचाप र हृदय रोगको जोखिम बढाउछ।
यो अध्ययन बिरामीहरूमा गरिएको थियो, जसमध्ये दुई तिहाइलाई पहिले नै उच्च रक्तचाप थियो र तिनीहरूले यसको औषधि खाइरहेका थिए। उनीहरु सबैलाई एक ग्राम पारासिटामोलको डोज दिनको चार पटक दिइयो।
यो पुरानो दुखाइबाट पीडित बिरामीहरूलाई दिइने एक सामान्य डोज हो। जहाँ अर्को दुई सातासम्म ती बिरामीहरूलाई पीडा कम गर्ने अन्य औषधि वा अन्य उपाय दिइयो। तीमध्ये नियमित पारासिटामोल खुवाइने बिरामीको रक्तचापमा अन्य उपचार लिइरहेका बिरामीको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो।
पारासिटामोल पनि (एनएसएआइडि) जस्तै भएको विज्ञहरू बताउँछन्। जसका कारण करिब २० प्रतिशतले हृदयाघात वा स्ट्रोकको जोखिम बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
टाउको दुखाइ वा ज्वरोको लागि सुरक्षित छ। तर यसलाई छोटो समयका लागिमात्र प्रयोग गर्नु उचित हुने अनुसन्धानकर्ताहरुको भनाइ छ।
यसैबीच, अनुसन्धानमा संलग्न प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा इयान म्याकइन्टायर भन्छन्, ‘टाउको दुख्ने वा ज्वरो आएका बिरामीमा थोरै समयका लागि पारासिटामोल सेवन गर्नेहरूका लागि हो। त्यस्ता बिरामीहरूमा यसको प्रयोग पक्कै पनि सही हुन्छ। तर रोगीहरूले यसलाई लामो समयसम्म नियमित रूपमा पुरानो दुखाइको लागि प्रयोग गर्छन्, तिनीहरूका लागि यो खतरा हुन सक्छ।
उही समयमा, एडिनबर्ग विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित क्लिनिकल फार्माकोलजीका प्राध्यापक जेम्स डियर भन्छन्, ’यो अध्ययनले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि पारासिटामोलको बढी प्रयोगले मुटुको धड्कन बढाउँछ। स्ट्रोक सबैभन्दा ठूलो जोखिम कारक हो। तसर्थ, डाक्टर र बिरामीहरू, विशेष गरी हृदय रोगबाट पीडितहरूले यसको दीर्घकालीन प्रयोगका फाइदाहरू र जोखिमहरूलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ।
अनुसन्धानकर्ताहरु लामो समयसम्म प्यारासिटामोल सिफारिस गर्नु अघि बिरामीहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्यको लागि पनि समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यो विशेष गरी उच्च रक्तचाप, हृदय रोग वा स्ट्रोकबाट पीडित बिरामीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। युनिभर्सिटी अफ एडिनबर्गले गरेको अध्ययन सर्कुलेशन जर्नलमा प्रकाशित छ।
(डिस्क्लेमरः यो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आधारित अनुदित सामग्री हो। स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै समस्या भएमा सम्बन्धित चिकित्सकको परामर्श लिनुहोला)